उपनिर्वाचनपछि भातृसंस्था नेविसंघले नेतृत्व पाउँछ : सभापति देउवा - अभियान खबर
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपनिर्वाचनपछि भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघले नेतृत्व पाउने बताएका छन्।
मंगलबार आफ्नो निवास पुगेका नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष ऋषिकेशजंग शाहलगायतसँगको छलफलपछि देउवाले १२ औं महाधिवेशनका लागि नेविसंघमा नेतृत्व दिइने बताएका हुन्।
‘उपनिर्वाचनपछि नेविसंघलाई नेतृत्व दिन्छु भन्नुभएको छ,’ शाहले भने, ‘न्याय गर्छु भन्नु भएको छ।’ देउवाले नेविसंघलाई नेतृत्व दिन सुनसरीका राजीव ढुंगानाको नाम सभापतिका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।
उनी नेविसंघको विधानअनुसार ३२ वर्षे उमेरहद कटेको भन्दै नेविसंघमै विरोध भइरहेको छ।
नेविसंघ नेतृत्वविहीन भएको नौ महिना भइसकेको छ।
सभापति देउवासँग भेटमा आफूले भारतीय सीमा अतिक्रमण र नयाँ नक्सामा नेपालको भूमि समावेशपछि नेविसंघले गरिरहेको सडक प्रदर्शनबारे जानकारी गराएको शाहले बताए।
‘आन्दोलन ठीक छ, राम्रो गर्‍यौं भन्नुभयो,’ शाहले भने।
प्रधानमन्त्री ओली चौथो विद्यावारिधि थाप्दै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरियाको काङनाम विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधि प्रदान गर्ने भएको छ। यो उनको चौथो मानार्थ विद्यावारिधि हो। सत्तरी वर्ष लामो इतिहास भएको काङनाम विश्वविद्यालय क्रिस्टिचियानिटी र मानवताको सिद्धान्तमा आधारित भएर सत्य, स्वतन्त्रता, समभाव आधारित शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो। ओलीले आजै ११ बजे नेपाली सेनाको सानो भर्‍याङमा रहेको स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानको […]
स्वयम्भूमा मनाउन लागिएको दलाई लामाको जन्मोत्सवमा रोक
गृह मन्त्रालयले तिब्बतका निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामाको जन्मदिन मनाउन रोक लगाएको छ। तिब्बती समुदायले शनिबार काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित मुस्ताङ समाज गुम्बामा लामाको जन्मदिन मनाउन लागेको थियो। जन्मोत्सव मनाउन लाजिम्पाटस्थित तिब्बती शरणार्थी कार्यालयले मागेको अनुमति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अस्वीकार गरेको हो। नेपालले एक चीन नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग गरिने हरेकपटकको भेटवार्तामा […]
बलात्कारबाट बच्न ‘रेप प्रुफ पेन्टीः पासवर्डले मात्र खुल्ने !
पेन्टीमा एउटा बटन लगाइएको छ जसलाई दबाउना साथ १०० वा १०९० नं. मा स्वचालित रूपमा फोन जाने
काठमाडौं । भारतकी एक किशोरीले बलात्कारबाट बचाउने पेन्टी बनाएकी छिन् । उत्तर प्रदेशकी १९ वर्षीया बीएस्सीमा अध्यनरत छात्रा सिनु कुमारीले ‘रेप प्रुफ पेन्टी’ आविष्कार गरेकी हुन् । यो आम पेन्टीभन्दा निकै फरक छ । जहाँ विद्युतीय सामग्री र प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । पेन्टीमा स्मार्ट लक लगाइएको छ, जुन पासवर्डले मात्र खुल्नेछ । त्यस्तै, पेन्टीमा […]